Adobe Photoshop dia manatsara ny famenoana Isi-Aware Fill | Famoronana an-tserasera
Manomboka ny Adobe Photoshop: Manatsara ny famenoana sary feno famenoana atiny ho azy
Amin'izao fotoana izao rehefa Adobe Photoshop dia nanatsara ny famenoana sary ho azy miaraka amin'ny Content-Aware Fill vaovao. Raha miteny amin'ny volafotsy, ity asa ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanoloana ny toerana tavela amin'ny zavatra iray izay nesorinay tamin'ny sehatra iray. Izany hoe mameno azy amin'ny fomba izay, amin'ny majika, mahatonga azy io hanjavona.
Ny fampivoarana Content-Aware Fill ho an'ny Adobe Photoshop dia misy safidy iray hisafidianana inona avy ireo ampahany amin'ny atiny sary ampiasaina hofenoina. Amin'izany fomba izany, manandrana misoroka ny loza mety hitranga isika rehefa fenoina artifact hafahafa mahafaty ny habakabaka.
Ny iray amin'ireo fiasa tsara indrindra dia izany vitantsika io saika amin'ny fotoana tena izy, na inona no ho topy mason'ilay faritra izay hofenointsika hahafantarantsika tsara izay ho valiny farany. Hisafidy ihany koa isika hahafahana mandrefy ny sehatra amin'ny fomba tsara kokoa amin'ny fomba fijery hafa, izay hanome fifandraisana matihanina bebe kokoa ary hahatratra izany vokatra majika izany izay mahavita mamorona programa toa ny Photoshop.
Photoshop izay manaraka manaitra anay amin'ny asany manokana, ny fomba nitrangan'izany miaraka amin'ny fahaizana misafidy ambadika iray manontolo. Ary raha mbola manana isika Manakaiky ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo fandaharana Mba ho tena mpifaninana dia manohy manalavitra ny tenany amin'ireo endrika manintona izay manasongadina ny haben'ny fahalianana sy ny matihanina izay mbola ankamamin'ity orinasa ity i Adobe
Mamarana, aza adino ny horonantsary navoakan'i Adobe mba hanehoana ireo fiasa vaovao rehetra amin'ny lozisialy Content-Aware Fill, na izay azontsika antsoina hoe majika Photoshop manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Manomboka ny Adobe Photoshop: Manatsara ny famenoana sary feno famenoana atiny ho azy
Fivarotana voalohany sy mahavariana manokatra Starbucks any Italia
Amin'ity fanitarana ho an'i Chrome ity dia azonao atao ny manandramana ny fahitana ny tranokalanao amin'ny Internet Explorer